Oromiyaa: Lola qindaa’aa Ummaata Oromoo irratti Nafxanyaan fi Loltoota Ertiraan baname – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromiyaa: Lola qindaa’aa Ummaata Oromoo irratti Nafxanyaan fi Loltoota Ertiraan baname
Oromiyaa: Lola qindaa’aa Ummaata Oromoo irratti Nafxanyaan fi Loltoota Ertiraan baname
Oromiyaa: Lola qindaa’aa Ummaata Oromoo irratti Nafxanyaan fi Loltoota Ertiraan baname Ummaani Oromoo WBO Tumsuun Of irraa qolachuu qaba.
Lollii yeroo Ammaa nafxanyaan oromiyaa irratti bante
1- Eenyuummaa Oromummaa balleessuuf kan yaadame.
2- Oromiyaa diiguuf kan karoorfame.
3- Afaan Oromoo fi Ummaata Oromoof Abbaa biyyuummaa Oromiyaa kan jechuun Barootaf ummaani oromoo itti wareegamaa ture addaa diiguuf kan yaadame eegalame akka ta’e Ummaani oromoo hubachuu qaba
Yeroo ammaa leelistoonni sirna nafxanyaa sirna miliinikii fi olaantummaa Amaaraa deebisuf dhama’an Abiyyii Ahmed dabalatee Oromoo fi oromiyaa irratti duula kana qiindeessun bananii jiru.
Ummaani oromoo kan danda’uu fi waan danda’uun WBO waliin ta’uun sirna nafxanyaa oromiyaa keessaa yerooni itti dhabamsiisu amma…
Biliisummaa, Walabummaa fi Birmadummaan Oromoo FI oromiyaa kan argamu Awwaala sirna nafxanyaa irrati.
Injifannoon ummaata bal’aa Oromoof..
Poolisii Humna addaa baay’inaan 600 ta’an kaampii komand post naannichaatti hidhamanii meeshaa irraa hiikamee jira. Sababiin kanarra nu du’uu hin deemnu ajjeefamuu malee ajjeefnee gallee hin beeknu
Ka’umsa Waraana Oromiyaa irratti labsameef Dr Itaanaa Habtee akkanaan ibseera.
1- perezedaantiin Naannoo Amaaraa ABO /Oromoon diina uummata Amaaraatti jechuun farajuu isaa.
2- Abiiyyi Ahmed Alii Miiliyoona Ajjeefnee Ethiopia itti fufsiisna jechuu
3- Abiiyyii Oromoon gochaa koo hin deggeeru yoo ta’e waggaa dhiibba tokko bakka oromoon turettii duubattin deebisa jedhee galma Abbaa gadaatti dhaadachun hojiitti hiikuu eegalanii jiru.
Jalqaba kan hiidhate jiru Tigraay irratti duuluu
Lammaaffaa Ummaata oromoo walloo cabsuu
Oromiyaa cabsuu yakka duguugaa sanyii raawwaachuf qaamni hidhate Amaarii ummaata oromoo irratti akka duuluu gochuudha
Kun eegaleera kanaaf Humna Addaa Amaaraa, Loltoota Ertiraa fi RIB Lolaaf oromiyaa irratti bobaasan ummaani oromoo kana hubachuun murteeffachuu qaba.
Dr Itaanaa Habtee BBS walin gaaffiif deebii irraa kan fudhatame.
Manni murtii ragaa Abbaan Alangaa Obbo Jawarfaa irratti dhiheeffatu dhaga’uuf beellama qabate.
Manni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa ramaddii 2ffaa dhimmoota yakka shororkeessumma oolmaa guyyaa har’aa ooleen, himannaa himatamtoota galmee Obbo Jawaar Mohammad jala jiraanii irratti akkaataa dhihaannaa ragaalee ilaalchisuun murtiilee adda addaa dabarsee jira.
Olmaa Manni murtiichaa oole irratti, akkaataa dhihaannaa ragaalee ilaalchisuun iyyata Abbaan Alangaa galfate kan ragoonni golgaa duubatti haa dhihaatan, jedhu mormuun, ‘Maqaafi eenyummaan namoota ragaa ba’anii dhaddachaaf ibsamuu qaba’ jechuun abukaatonni mana murtichaa gaafatanii akka turan Obbo Kadir Bulloo OMN-tti himaniiru.
Manni murtiichaas yaada gamaafi gamanaa erga dhaggeeffatee booda, iyyata Abbaa alangaa kan ragaan namoota 146 golgaa duubaan akka dhihaataniif gaafatu dabalate, gaaffii abukaatonni eenyummaan ragaa baatotaa haa beekamu jechuun gaafatanis kufaa akka taasise OMN Abukaattoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Kadir Bulloo irraa odeeffateera.
Sababa ragaaleen golgaa duubatti akka hin dhihaanne manni murtii ajajeef, ragaawwan kiyya irra deebiin amansiisuu waanin qabuuf manni murtii beellama yeroo fagoo naaf haa qabu jechuun Abbaan alangaa gaafatus, manni murtiichaa yaada Abukaattotaa dhaggeeffachuun gaaffii abbaa Alangaa kana kufa taassisee jira. Bu’uruma kanaan, manni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa ragaa Abbaa Alangaa dhaga’uuf Eebila 5, 2013 tti beellama qabatee jira.
Mootummaan qarshii baasee dhama’ee maqaa waraana Bilisummaa Oromoo xureessuuf jecha oromoota hubannoo siyaasaa hin qabne miira keessa galchuun WBO bineensa fakkeessuun sammuutti bocanii ergan.
Hundi isaanii ijoollee qotee bulaa oromoo fi qotee bultootadha. Maqaa sakatta’insa WBO jedhuun bobbaafaman haa ta’u malee haalli akka isaanitti himame hin taane. Waraanni bilisummaa oromoo nagaa kan jaalatu Oromoo fi saboota kamuu akka hin tuqne Kaayyoo isaa Walabummaa oromoo qofa akka ta’e barnoota kennuun hawaasa kanaaf barnoota kenne. Jaalala kanaa WBO waliin suura ka’uun akkatti nagaan gara qee’ee maatii isaaniitti bobbaafaman.
WBOn namoota nagaa ajjeese jedhanii dokumantarii hojjetanii maqaa waraana keenya balleessuuf ture hin milkoofne.
Oduu Ammee: Ajejoonni waraanaa Liyyuu Hayilii Musxafee 5 ganama kan ajjeefaman.